Hordhac: Burnley vs Man City –Guardiola Oo Rajaynaya Inuu Jidka Guusha Kusoo Laabto, Shaxaha Macquulka Ah iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyada & Ganaaxyada - Gool24.Net
Hordhac: Burnley vs Man City –Guardiola Oo Rajaynaya Inuu Jidka Guusha Kusoo Laabto, Shaxaha Macquulka Ah iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawacyada & Ganaaxyada
Manchester City ayaa caawa marti u noqonaysa naadiga Burnley, waxaanay wax walba u samayn doontaa inay guul lasoo laabato kaddib kulan barbarro niyad-jab ah oo ay Sabtidii la gashay Newcastle United.
Kooxda horyaalka difaacanaysa ee Man City waxay 11 dhibcood ka hoosaysaa Liverpool oo hoggaanka Premier League haysa, sidoo kalena waxa saddex dhibcood ka horreysa Leicester City oo labaad fadhida, laakiin kooxda Pep Guardiola waxay caawa la iman doontaa jihaad aanay waxba uga dambaynin si aanay xilli hore uga bixin tartanka koobka.
Manchester City oo ay ka dhaawacan yihiin xiddigihii khadka difaaca, ayaa waxay kale oo ay u dhinaysaa booskii uu banneeyey Vincent Kompany oo xagaagii ka tegay, kaas oo aanay helin laacib si buuxda booskaas u istaaga, isla markaana goolal ku badbaadiya kulamada adag ee afka hore iyo khadka dhexe shaqayn waayaan.
Marka garoonka Turf Moor gudihiisa lagu xeroodo, Burnley waxay haysataa rikoodho wanaagsan oo ay xili ciyaareedkan soo bandhigtay oo ka caawin kara inay niyad-jabiyaan Pep Guardiola iyo xiddigihiisa, laakiin waxa mushkiladdoodu inay illowsan yihiin sida looga badiyo kooxaha waaweyn, iyadoo guul-darrooyin ay la kulmeen ciyaarihii ay ka hor tageen Arsenal, Liverpool, Leicester City iyo Chelsea.
Burnley oo fadhida kaalinta 10aad waxa kale oo walaac gelinaya in Manchester City ay ugu xigi doonto Tottenham, taas oo tababare Sean Dyche madax-xanuun ku ah.
Marka la eego natiijooyinka lixdii kulan ee ugu dambeeyey, Burnley afar jeer ayaa laga badiyey labana guul ayay heshay, balse Manchester City ayaa lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey ee dhamaan tartamada keentay natiijooyin ka duwan kuwii laga bartay xili-ciyaareedyadii u dambeeyey, waxaanay guuleysatay laba jeer oo kaliya, saddex barbaro ah iyo hal kulan oo laga badiyey, laakiin haddii aynu si gaar ah u eegno natiijooyinka lixdii kulan ee horyaalka Premier League oo kaliya, waxay Man City guuleysatay afar mar, hal laga adkaaday iyo mid barbar-dhac ah.
Ciyaarta: Burnley vs Manchester City
Waqtiga: 11:15 pm – saacadda Geeska Afrika
Manchester City waxa dhaawacyo kaga maqan xiddigo muhiim ah oo uu ku jiro gool-dhaliyahooda Sergio Aguero oo muruqa waxyeello kasoo gaadhay.
Sidoo kale, xiddigaha muddada dheer dhaawaca ku maqnaa ee Leroy Sane iyo Aymeric Laporte ayaan la filaynin inay garoomada kusoo laabtaan illaa sannadka cusub ee 2020, halka Oleksandr Zinchenko ay xaaladdiisu soo wanaagsanaanayso balse aanu diyaar u ahayn kulanka.
Nicolas Otamendi ayaa khadka difaaca kula midoobi kara Fernandinho, waxaana kaydka geli kara John Stones, hase yeeshee khadka dhexe waxa nasasho usoo qaatay Rodri iyo Bernardo Silva oo u dagaallami doona inay jidka guusha kusoo celiyaan kooxdooda.
Raheem Sterling iyo Kevid de Bruyne ayaa noqon doona xoogga caawin doona Gabriel Jesus oo ah dhaliyaha kaliya ee Citizens ay haysato maadaama uu maqan yahay Aguero.
Kooxda martida loo yahay ee Burnley, waxa usoo yeedhay war wanaagsan oo ah inay usoo laabteen Johann Berg Gudmundsson iyo Matej Vydra oo xilli dambe loo sheegay inay taam yihiin, ciyaartana safan karayaan.
Ashley Westwood oo ganaax seegay kulankii Crystal Palace ayaa soo laabtay, balse tababare Dyche waxa uu ka fakari doonaa ciddii buuxin lahayd booska Charlie Taylor oo dhaawac lagaga saaray kulankii Palace daqiiqaddii 36aad.
Shaxda macquulka ah ee labada kooxood ku ciyaari doonaan: